Zvemagariro Midhiya Akatarwa Mhedzisiro pane Vatengi Zvakaitika | Martech Zone
Zvemagariro Midhiya Akatarwa Mhedzisiro pane Vatengi Zvakaitika
Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Liz Greene
Pakatanga mabhizinesi kupinda munyika yemagariro enhau, yaishandiswa senzvimbo yekutengesa chigadzirwa chavo uye kuwedzera kutengesa. Mumakore mashoma apfuura, zvakadaro, vezvenhau vezvemagariro vakapinda mune yakasarudzika svikiro renharaunda yepamhepo - nzvimbo yekudyidzana nemhando dzavanoyemura, uye zvakanyanya kukosha, tsvaga rubatsiro kana vaine nyaya.
Vatengi vakawanda kupfuura nakare kose vari kutsvaga kutaurirana nema brand kuburikidza nevezvenhau, uye kambani yako haizokwanise kukwikwidza kana iwe ukasajoinha. Kutaurirana kwese kunokosha, uye kushaya hanya nevatengi hakusi sarudzo - kuita kudaro kuchave ne zvakashata pane ruzivo rwevatengi, uyezve, zvinokuvadza yako yepasi mutsara.
Unoziva here kuti nei vatengi vachida vezvenhau zvakanyanya? Iyo inovapa kugona kubvunza mibvunzo uye kusiya mhinduro mune yeruzhinji foramu uko mhinduro yako iri kuratidzwa kuti munhu wese aone - uye nditende ini, vamwe vatengi vari kutarisa padhuze. A kudzidza kubva kuConversocial vakawana kuti 88% yevatengi kashoma kuti vatenge kubva kuchiratidzo chisina mhinduro dzevatengi pamasocial media. Chaizvoizvo, maratidziro aunoita nevatengi vako ari kutorwa mukufungwa nevangangove vatengi.
Vatengi nhasi vajaira kugamuchira mhinduro nekukurumidza. Kana vatengi vachibvunza mibvunzo pasocial media, ivo vanotarisira kuti iwe udzokere kwavari nekukurumidza nemhinduro. Saizvozvo, 42% yevatengi vanotarisira mhinduro mukati meawa, nekumwe 32% kutarisira kuti nguva ive mukati memaminitsi makumi matatu. Zvichitaurwa zviri nyore, iwe unofanirwa kuve neminwe yako pakurova nguva dzese nekugara uchiongorora maakaunzi enhau kuitira kuti uone makomendi nemibvunzo pavanopinda.
Kana iwe ukawana maraki yako iri pakati peyemagariro midhiya nhamo, iwe unofanirwa kuve wega kune iyo nyaya iri kubvunzwa kunze uye nekupa mhinduro nekukurumidza. Kana iwe (kana vashandi vako) musingakwanise kupa mhinduro nekukurumidza, chengetedza mutengi kuti urikushanda pairi uye uteedzere nekukurumidza kana uchinge wapindura. Chinhu chekupedzisira chaunoda kuita kupokana nekushivirira kwevatengi vako nekudzika kana kusava nehanya nazvo zvachose- izvo zvinogona kuve nemhedzisiro.
Mumazuva apfuura pasocial media, vatengi vanogona kugovana zvakashata zvekutenga zviitiko nenhengo shoma dzemhuri, shamwari dzepedyo, uye vavanoshanda navo. Kune makambani, iyi yaive nhamba inogoneka yekutarisana nayo. Nekudaro, nekuuya kweFacebook neTwitter, vatengi vakatsamwa vane huwandu hunoratidzika kunge husingagumi hwevanhu kuti vatorezve nenyaya dzekushatirwa kwevatengi uye zvigadzirwa zvine shoddy.
Huwandu hwakakomberedza chiitiko chitsva ichi hachisi chekuhotsira pa:
45% yevatengi vanogovana zvakashata zvebasa revatengi kuburikidza nesocial media (Kujeka Kutsvagisa )
71% yevatengi vanowana inokurumidza uye inoshanda brand mhinduro pane zvemagariro midhiya vangangokurudzira iyo brand kune vamwe, zvichienzaniswa ne19% chete yevatengi vasingagamuchire mhinduro. (NM Inokurudzira)
88% yevanhu vanovimba online ongororo yakanyorwa nevamwe vatengi zvakanyanya sekuvimba kwavo kurudziro kubva kune avo vehukama. (BrightLocal)
Kana makambani anoita uye opindura kune zvikumbiro zvevashandi pamusoro pezvemagariro enhau, vatengi vacho vanopedzisira vashandisa makumi maviri kubva muzana kusvika makumi mana muzana nekambani. (Bain & Kambani)
85% yevafeni vezviratidzo paFacebook vanokurudzira avo mabhenji kune vamwe (Syncapse)
Vatengi vane 71% mikana yekuita kutenga zvichibva pamagariro enhau anotumirwa (Hubspot)
Vatengi vako vane zvakawanda zvinosvika uye zvinofurira kupfuura nakare kose, uye zviri mukufarira kwekambani yako kuvachengeta vachifara nekuita navo pasocial media nekukurumidza uye kazhinji sezvazvinogona.
Iwe unogona zvakanyanya kuvandudza ruzivo rwevatengi nekuita mukuvaka hukama pane ako masocial media chiteshi. Vatengi vako vanogara vachitenga sarudzo pamanzwiro, pane kufunga - uye hapana chinotsiva kudyidzana kwevanhu mukukudziridza kubatana kwemanzwiro.
Iwe unogona kukurudzira kubatana kwehukama uye kuwana muganho pamusoro pemakwikwi ako nekuona chokwadi kuti vatengi vako vanoziva kuti vanoonekwa uye vanokosheswa.
Pindura nekukurumidza kumashoko avo.
Svitsa uye utende vanhu vamwe kana vachitaura kana kugovana zvaunotumira
Tumira tsamba yekutenda pane vezvenhau pavanotenga.
Govera kudzikisira pane zvavanofarira zvinhu.
Sekureva kweMarket Force, ichisimbisa chiitiko chevatengi chinogumisira muhuwandu hwekugutsikana huwandu uye 2-12 zvakapetwa nguva yepamusoro ratidziro - ese ari maviri anogona kukanganisa zvakanyanya kuvimbika kwevatengi nemari. Paunoshandisa vezvenhau nenzira kwayo, ichava nemhedzisiro yakanaka pane ruzivo rwevatengi - uye ndiani anoziva, unogona kupedzisira wave vatengi vanofara kuva vatsigiri vezviratidzo.
Tags: basa rakaipa revatengibainbrightlocalshandukovatengi vanozivaMabatiro evatengikasitoma rutsigirokuenzanisira kutsvagisaManzwirovashandihubspotkubata kwevanhuimba yekudyidzanamusikanm kukurudzirakutenga sarudzokusvikaevanhu vezvenhaumweya wemhandotsigirazendesk
Liz Greene imbwa inoda, nhoroondo inodzidza, pop tsika geek kubva kuGuta rakanaka reMiti, Boise, Idaho. Unogona kumubata zvakashata zvakashata pablog rake, Pakarepo Lo.
Zvatakadzidza NezveKutenga Kwevatengi nekuSwining for the Fences
Makore zana Gare gare: Humambo hweMunyoreri
Dec 21, 2016 pa 9: 55 AM
Imwe yemabhenefiti akakurisa emasocial media ebhizinesi kurishandisa kuwedzera yako traffic traffic. Kwete chete kuti vezvenhau vanokubatsira iwe kuendesa vanhu kune yako webhusaiti, asi zvakanyanya pasocial media mitezo iwe yaunogamuchira, iyo yakakwira yako yekutsvaga chinzvimbo ichave iri.
Zvita 21, 2016 na1: 22 PM
Zvisinganetsi, ichokwadi ... asi Google yakambotaura kuti haishandise kugovana munharaunda zvakananga kuona chinzvimbo. Zvisinganetsi, kugovana zvako zvemukati munharaunda kazhinji kunoita kuti vamwe vanhu vagovane uye vataure nezvazvo. Kana izvo zvinongedzo zvakakosha zvikawana nzira yavo kune akakodzera masayiti, saka zvinobatsira kuseta.